Buugga Tilmaamaha Cabbirka Cudurka Halista ah ee Ay Soo Saarayaan Qeybaha | RayHaber | raillynews
HomeGUUDTilmaamaha Cabbirka Cudurka Fududeynta ee Caafimaadka Waxaa daabacay Qeybta
Sida laga soo xigtay waaxaha, tusaha taxaddarka coronavirus waa la daabacay
Agaasinka guud ee Caafimaadka Shaqada iyo Badbaadada ee Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada ayaa daabacay tilmaamo iyo liis-warbixineeyaal la qaadayo oo ku saabsan la dagaallanka noocyada cusub ee coronavirus ee timo-jaraha, makhaayadaha wax lagu qurxiyo, meelaha lagu qurxiyo, adeegyada hoyga iyo gaadiidkaba inta udhaxeysa gaadiidka dadweynaha.
Tilmaamaha, oo ay ku jiraan cabiraado u gooni ah waax kasta, ayaa loo diray xirfadleyda OSH iyo dhammaan ganacsiyada.
Dukaamada Timaha lagu xirto, Timo-dhaqeyaasha iyo Dukaamada Quruxda
Qalabka loo isticmaalay way faafi doonaan Macaamiil kasta kadib
Sida ku xusan tilmaamaha ay daabaceen Agaasinka Guud ee Caafimaadka Shaqada iyo Amniga; Qaar ka mid ah tillaabooyinka ay timo -abixiyeyaasha, kuwa dharka lagu xareysto ku xirto iyo meelaha lagu qurxiyo lagu qurxiyo waa inay yihiin kuwa soo socda
Albaabka waxaa laga hubin doonaa heerkulka jirka ee shaqaalaha iyo macaamiisha.
Maaskaro la tuuray iyo kormeerayaal ayaa la siin doonaa macaamiisha u imanaya goobta shaqada.
Wareeg kasta waxaa lagu nadiifin doonaa boqolkiiba 70 aalkolo leh dhammaan agabyada iyo qalabka la isticmaalay.
Shaqaalaha ka shaqeeya goobaha shaqada waxaa la siin doonaa maaskaro la adeegsan karo iyo gaashaamo wajiga laga ilaaliyo oo waafaqsan heerarka.
Jaraha ayaa la tuuri karaa.
Gacmo gashiga, jeebabka iyo gogosha ay shaqaaluhu adeegsadaan waa la beddeli doonaa macmiil kasta. Maqaska, cadayga iyo timaha iyo waxyaabaha kale ee daryeelka ayaa si joogto ah loo baabiin doonaa.
Aaladaha shaqsiyeed waxaa loo adeegsan doonaa habraacyada sida manicures iyo pedicures.
Qorsheynta ballantu waa la qaban doonaa si looga hortago isu-imaatinnada goobaha shaqada.
Ugu yaraan hal kursi ayaa madhnaan doona inta lagu gudajiro howlaha sida timo-jarista.
Daryeelka maqaarka, qurxinta iyo adeegyada qurxinta joogtada ah ayaa laga fogaan doonaa haweenka timo-dhaqeyaasha iyo xarumaha qurxinta.
Muuqaal daahsoon ayaa la dhex dhigi doonaa Shaqaalaha iyo Macaamiisha soo dhaweynta
Xarumaha Degaanka, Makhaayadaha iyo Jimicsiyada
Tallaabooyinka ugu waaweyn ee ay qaadi doonaan shirkadaha shirkadaha bixiya adeegyada hoyga iyaga oo raacaya tilmaamaha uu soo diyaariyey Agaasimaha Guud ee Caafimaadka Shaqada iyo Amniga ayaa ah sida soo socota:
Shaashad daah fur ah ayaa la dhex dhigi doonaa macaamiisha iyo shaqaalaha goobta soo dhoweynta.
Iridda laga galo maqaayadaha, isboortiga iyo hoolalka hudheelada, heerkulka jirka ee macaamiisha ayaa la qiyaasi doonaa.
Macaamiisha sugaya goobta loo-olole ayaa bulsho ahaan u fariisan doona.
Alaabada sida maaskaro, galoofyada, lebisyada, dufanka iyo lafaha la siiyo qofka shaqaalaha ah ayaa noqon doona shaqsi.
Miisaska waxaa lagu hagaajin doonaa iyada oo loo eegayo masaafada bulshada ee hoolka cuntada. Hadday suurtagal tahay, shirkadda waxaa la siin doonaa alaabo la tuuri karo oo biyaha la cabbo waxaa lagu qaybinayaa weel xidhan.
Fargeeto, qaaddo, mindi, sonkor, cusbo iyo cadayga ayaa la tuuri doonaa.
Ka sokow nadiifinta meelaha ay ka mid yihiin biibiilaha, makhaayadda, saunaha, jikada, albaabka albaabka, jaranjarooyinka, kaararka qolka, kontaroolada telefishanka, qalabka isboortiga sidoo kale si joogto ah ayaa loo jeerin doonaa.
Saraakiisha animada iyo barayaasha jimicsiga ayaa fiiro gaar ah siin doona sii wadida fogaanta bulshada. Hawlaha sida cayaaraha kooxda iyo qoob-ka-ciyaarka ayaa laga fogaan doonaa intii suurtagal ah.
Fogaanta Bulshada waxaa loo tixgelin doonaa Goobaha Nasashada
Gaadiidka Dadweynaha ee Gaaraya
Tilmaanta ay daabacday Agaasinka Guud ee Caafimaadka Shaqada iyo Badbaadada, qaar ka mid ah arrimaha lagu tixgaliyo gaadiid ku qaadista gaadiidka dadweynaha ayaa ah sida soo socota:
Xaashiyaha casriyeysan iyo waraaqaha boostada ayaa laga heli karaa boodhka macluumaadka ee xarunta.
Habka cusub ee kuraasta waxaa lagu hagaajin doonaa iyadoo lagu yareynayo qaadista awoodaha gawaarida gaadiidka dadweynaha qeyb ahaan.
Iibiyaasha tigidhada iyo saraakiisha gawaarida ayaa dhaqi doona gacmahooda kahor intaadan bixin.
Maaskaro la tuuri karo ayaa la qaybin doonaa ka hor iyo inta safarka lagu jiro.
Meelaha gawaarida ee lala xiriiriyo ee joogtada ah waa la jeermiskayaa.
Xeerarka fogaanta bulshada ayaa lagu raaci doonaa meelaha nasashada.
Tirada askarta ka shaqeysa isla shaqada saldhigga waa la ilaalin doonaa ugu yaraan.
Gaariga si dabiici ah ayaa loo hayaa.
Askartu waxay xidhaan wejiga masar. Nadiifinta aragtida waxaa lagu sameyn doonaa si waafaqsan heerarka.
Tallaabooyinka Ramadaanka ee Coronavirus Ramadaanka La daabacay!
Marmaray Horumarinta Horumarinta Barnaamijka ayaa la sii daayay July
Dhismaha gawaarida Marmaray tuubada horena loo sii daayey video
Go'aan ka qaadashada Gargaarka Degdegga ah Laba Labadood oo TCDD ah oo rasmi ah